Daawooyinka 3 ee Neuralgia - Hagaajinta Caafimaadkaaga - TELES RELAY
ACCUEIL » Daawooyinka dabiiciga ah Daawooyinka 3 ee Neuralgia - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Neuralgia waa cillad xagga dareenka ah oo sababa nooc ka mid ah shoog koronto madaxa, wejiga ama qoorta. Xaalad aad u xanuun badan. Qodobka intiisa kale, waxaan ku ogaan doonaa sida looga daaweeyo neuralgia daawooyinka dabiiciga ah.
Dadka qaba neuralgia badanaa waxay leeyihiin wax kabadan sano 50, sida maqaalka uu xaq u leeyahay Trigeminal neuralgia: xanuunka ugu xun dunida?. Si kastaba ha noqotee, astaamaha kor lagu soo sheegay ee sida caadiga ah waxay leeyihiin muuqaal aan caadi ahayn.
Waxaa loola jeedaa waxaa jiri kara toddobaadyo marka bukaanku aanu lahayn wax astaamo ah. Tani waxay ka dhigeysaa ogaanshaha mid aad u adag waxaana laga yaabaa inuu shaki galiyo in uu yahay cudurka neuralgia. Xaaladdaani waxay adkaynaysaa bilaabista daaweyn waqtigeedii la joogo.
Daaweynta dabiiciga ah ee lagu daaweeyo neuralgia
Kahor intaysan kashifin dawooyinka dabiiciga ah oo wax weyn ka tari kara daaweynta daaweynta neuralgia, waxaa muhiim ah in la adkeeyo muhiimadda ay leedahay in takhtarka la tago. Fursadahaani ma xallin doonaan dhibaatada, kaliya waxay ka caawin doonaan bukaanka inay ladnaadaan.
Xaqiiqdii, xulashooyinka aan soo bandhigi doonno ma beddeli karo daaweynta uu dhakhtarku kugula talin karo. Cillada noocan ahi waxay u baahan tahay dawooyin gaar ah iyo, xaaladaha qaarkood, daaweynta qalliinkasida lagu sharaxay maqaalka Trigeminal neuralgia: talooyinka Faransiiska ee ugu horreeya ee ku saabsan ogaanshaha iyo maaraynta.
Elderflower waa daawo caan ah oo loo yaqaan 'neuralgia'. Runtii, ubaxyadaas ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa daawada dhirta maxaa yeelay waxay leeyihiin guryo gaar ah oo waxtar u leh neuralgia. Odayga waa:
emollient : dibedda loo isticmaalo, waxay kaa caawineysaa yareynta caabuqa.
maroojiska : waxay ka hortagtaa dareenka naxdinta koronto.
veinotonic : waxay kobcisaa wareegga dhiigga.
Daaweyntan dabiiciga ahi waxay u khusaysaa dusha. Si tan loo sameeyo, si fudud u gali faleebo ee caleemaha geedka 'oldberry'. Markaa, waxaa lagama maarmaan ah in la qoyo cabitaan dareeraha la helay, kaas oo markaa lagu dabaqi doono aagga madaxa, wejiga ama qoorta. Relief ma noqon doonto waqti dheer imaatinka.
Waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay: Infusions '4' si loo nadiifiyo jirkeena
2. Vetiver si wax looga qabto neuralgia
Le vetiver waa warshad isticmaalkiisa ugu baahsan uu ku jiro qaabkeeda saliida. Runtii, dhismaheeda xasilloonida iyo anti-bararka waxay ka dhigayaan mid si wanaagsan u wada shaqeeya wax ka qabashada neuralgia.
Si kastaba ha noqotee, si aad runtii waxtar u yeelatid cudurka neuralgiawaxaa lagu talinayaa in la damiyo xididka geedka. Marka talaabadan la soo gabagabeeyo, faleebo waa in lagu dabaqaa lakabka kore ee aagga ay dhibaatadu saamaysay (madaxa, wejiga, qoorta), iyadoo la adeegsanayo kala go 'jilicsan.
Thearnica waa mid ka mid ah daawooyinka ugu dambeeya ee neuralgia loo isticmaali karo in lagu yareeyo calaamadaha. Warshadani waxay soo saartaa ubax hurdi ah oo leh guryo fara badan si loo daaweeyo dhibaatooyin fara badan oo kala duwan. Arnica waxaa ka mid ah:
hab yareynta bararka (bararka)
Mid ka mid ah qaababka ugufiican ee loo isticmaalo daawayntaan waa in lagu mariyo maqaarka. Taas awgeed, waxaan kugula talineynaa isticmaalka tincture ee arnica. Tan waxaa lagu qasi doonaa biyaha waxaana ku adeegsan doona duugis jilicsan aagagga ay dhibaatadu saameysey.
In kasta oo talooyinkaan 3 ee la-tacaalida neuralgia, waxaa muhiim ah in la xasuusto taas Neuralgia kaliya laguma bogsiin karo tan. Waa lama huraan in la helo xakameyn iyo daaweyn ku filan.
Xaqiiqdii, Daaweyntani waxay kabin karaan kuwa dhakhtar soo qoray. Si kastaba ha noqotee, haddii aan rabno inaan dareemno degganaan, waxaan weydiin karnaa dhaqtarkayga haddii daaweynta ugu weyn ay saameyn ku yeelan karto adeegsiga daawooyinkaan dabiiciga ah.
Daawooyinka uu dhakhtarku qoro waa daawada xinjirowga lidka ku ah iyo murqaha nasashada. Cirbadaha Botox (qiyaaso aad u yar) ayaa sidoo kale lagu talin karaa.
Waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso: Daawooyinka Corticosteroid: waa maxay?
Xaaladaha ugu daran, qalliinku waa xalka ugu fiican. Waa hab lagu saxayo dhibaatada xididka isla markaana looga hortago sii wadida waxyeelada nolosha bukaanka. Si kastaba ha noqotee, kiiskii hore oo kaliya daawooyinka la qaato, daawooyinka aan soo sheegnay waxay noqon karaan dhammaystir aad u fiican.
Weligaa miyaa lagaa helay cudurka neuralgia? Ma jiraa qof hareerahaaga ah oo hadda silica qaba? Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad weydiiso dhakhtarkaaga haddii ay suurogal tahay in la isticmaalo daawooyinkaan dabiiciga ah si loo kabo daaweyntaada caadiga ah.
Haddii aad bilawdo adeegsigaaga, waxaan rajeyneynaa in natiijooyinka ay dhakhso u muuqan doonaan waxaad arki doontaa horumar kaa caawin doona inaad heysato nolol tayo leh.
Daaweynta dabiiciga ah ee fibromyalgia
Fibromyalgia waa cudur aad ugu badan dumarka. Maqaalka soo socda, waxaan kugu soo bandhigeynaa habab dabiici ah oo kala duwan oo lagu daaweyn karo. Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/3-remedes-pour-faire-face-a-une-nevralgie/